Tsara Indrindra "Mpivady" Mampiaraka Toerana Safidy — (Fitsapana Maimaim-Poana)
Tsara Indrindra «Mpivady» Mampiaraka Toerana Safidy — (Fitsapana Maimaim-Poana)
Ao amin’ny bokiny «Ny Vady Ampifamadiho ny,» Louisa Leonidas nilaza hoe: «ny Olombelona dia mafy izay nampifandraisina mivantana mba hahazoana ny fifandraisana. Isika dia manao izany amin’ny maro ny fahaiza-manaony, mihelina, ary maharitra ela, eo amin’ny samy vavy, na ny ao anatiny sy any ivelan ‘ ny tany ny saika hatraiza hatraiza nanaiky ny fiaraha-miasa isika hoe fanambadiana. «Fifandraisana tsy toy ny mainty sy ny fotsy tahaka izay efa nahazatra ho. Ny olona dia izao mamaritra ny fanoloran-tena ao amin’ny ny fomba, ny fomba izay miasa ho azy ireo, sy ny mampiaraka toerana dia nipoitra ireo famaritana. Ny fiarahana amin’ny aterineto dia tsy misy intsony fotsiny ho an’ny tokan-tena — izany dia midika ihany koa ho an’ny mpivady mitady hitombo akaiky, zava-manitra ny firaisana ara-nofo ny fiainana, ary hihaona mitovy ny lehilahy sy ny ny vehivavy. Izany no antony efa niara-nitondra ambony ny mpivady mampiaraka toerana. Jereo ary jereo hoe iza no tsara indrindra ho anao sy ny mpiara-miasa. Tokan-tena sy mpivady samy koa tonga soa eto amin’ny Adult Friend Finder, iray amin’ireo lehibe indrindra ny toerana ho an’ny hookups, threesomes, raharaha, sy ny hafa sexy fihaonana. Tsy maninona raha toa ianao straight, gay, tia vehivavy nanova taovam-pananahana, lahy na, na irony sarimbavy irony izy — Adult Friend Finder afaka hahita ny tonga lafatra (na ny mifanaraka) avy ao aminy ny tapitrisa ny mpikambana. Plus, ny vola no tsy misy tsara eto satria ny fitsipika maha-mpikambana dia tena malalaka ary mamela anao download, sonia, fikarohana, sy manadala ankizilahy. Mpivady mitady zava-manitra ny firaisana ara-nofo ny fiainana dia mahatsapa tsara ao an-tokantrano eo Ho Maditra, izay hookups, threesomes, namana amin’ny soa, miditra, sy ny raharaham-amporisihina, tsy niondrika teo. Maimaim-poana io toerana efa an-tapitrisany ny mpikambana sy mitombo be isam-bolana, ary tsy mila miahiahy momba ny fiainana manokana ny maha-jeopardized na. Ho Maditra mampiasa SSL fanafenana ny tandremo avokoa ny vaovao azo antoka sy mba hisorohana ny scammers tsy manararaotra ny hafa. Ny fanampiana fahatelo ny fifandraisana faran’izay mora amin’ny Friend Finder:) Mifidy ny lehilahy sy vehivavy.) Mifidy ny lahy sy ny vavy izay tadiavinao.) Manome ny taona, ny firenena, ary zip na paositra fehezan-dalàna.) Ampidiro ny adiresy mailaka, efijery anarana, sy ny tenimiafina.) Manomboka ny fikarohana sy ny filalaovana fitia. Ianao dia tsy mila ny kitapom-batsy, fa izany ampahany ny Namany izay nahita dingana. Ny toerana mahita olona an-tapitrisany maro ny mpitsidika isam-bolana, noho izany dia tsara kokoa hanomboka. Ny pelaka sy ny bisexual mpivady no tanteraka maimaim-poana ary amporisihina ny tenany amin’ny Olona ny Firenena. Na inona na inona ny kink dia, dia afaka mahita ny iray na ireo mpiara-roa, izay ho azy, koa. Ny zavatra voalohany tokony atao dia ny manome ny toerana ny fifandraisana sata, ny taona, ny toerana, sy ny mailaka.
Manolo-tanana mba nivadika amin’ny mpampiasa amin’ny manokana na miandry ho an’ny Olona ny Firenena mba ho tena mifanaraka soso-kevitra ho anao. Ny fitadiavana ny fahatelo na mihoatra mba mainka hanampy ny fiaraha-miasa dia ho toy ny mora toy ny mianjera eny midira ao amin’ny Lesbiana Personals. Nandritra ny tapitrisa ireo vehivavy miray amin’ny vehivavy na bisexual vehivavy, ary an-jatony, an’arivony amin’izy ireo no an-tserasera ao amin’ny faritra misy anao na oviana na nomena fotoana. Mba mifandray amin’izy ireny, mandefa virtoaly flirts, tsidiho ny chatroom, manomboka amin’ny hafatra manokana, na mampiasa velona roa-dalana lahatsary. Dia afaka maminavina fa avy ny anaran — Swingers dia mampiaraka toerana ho an’ny mpivady sy ny tokan-tena mitady maditra mahafinaritra, na ry zareo iray-alina mijoro, threesomes na foursomes, na vondrona firaisana ara-nofo. Mihoatra, ireo mpikambana mandrafitra ny mpampiasa fototra, ary afaka ny hiaraka amin’izy ireo ary manomboka mifampiresaka hatrany amin’ny alalan’ny lahatsoratra na horonan — maimaim-poana. Mpivady Mampiaraka dia iray amin’ireo toerana tena maimaim-poana ny mampiaraka toerana ho an’ny mpivady, satria ny tontolo iainana dia namana sy malala-tsaina, ka tsy afaka maneho ny faniriantsika tsy misy fitsarana. Straight, gay, lesbiana, ary bisexual tokan-tena sy mpivady dia tonga soa eto ny sonia, mamoaka ny vaovao sy ny sary, ary mijery ny mombamomba ny sexy olona eo akaiky eo — amin’ny tsy misy vidiny. Kopple dia samy hafa ny mpivady mampiaraka tranonkala ao fa ny asa fitoriana dia mba hifandray twosomes amin’ny hafa twosomes noho ny fisakaizana, toro-hevitra, sy ny daty alina buddies — tsy miditra.
Kopple mino «fanahy Tsirairay dia manana vady
Isaky ny roa manana lalao, » ary izy ireo hanampy anao hahita izay mitovy ho maimaim-poana. Mampiasa ny feno fikarohana endri-javatra mba mijery ny zavatra tahaka toy izany koa ny tombontsoa, ny fironana ara-nofo, ny toerana, sy ny mpikambana vaovao. «Raha Harley Quinn sy Poizina Ivy afaka manana non-monogamous fifandraisana, ka mety ho azonao, dia» ny teny izay manao veloma anareo eo Poly matchmaker — ny mampiaraka toerana ho an’ny mpivady izay mino ny foto-kevitra toy ny ethnical tsy hoe tokony hanambady tokana, ny fifandraisana misokatra, misokatra ny firaisana ara-nofo, ary polyamory. Fitsipika ny mpikambana dia afaka manao ny mombamomba azy, ny fomba fijery ny hafa ao amin’ny banky angona, afa-favoris, mandefa virtoaly manala azy, sy mahazo isan-karazany poly harena — tsy kitapom-batsy ilaina. Araho ny dingana telo eo an-Tanako Polyamory sy ny fisoratana anarana maimaim-poana tanteraka. Ampio ny mailaka.) Mifidy ny tenimiafina.) Safidio ny daty fahaterahana, toerana, ary nisafidy ny kaonty karazana. Izany dia ahitana ny lahy ny vavy roa, lahy mpivady, vehivavy roa, na vavy na lahy tokana. Avy eo dia hookups, ny namana, ny daty sy ny fifandraisana fotsiny manodidina amin’ny zorony. Feno Faniriana dia matetika antsoina hoe anisan’ny tsara indrindra mampiaraka toerana ho an’ny mpivady, satria izany ho an’ny olona izay tena nanolo-tena ny swinger fomba fiaina. Afa-tsy mpivady sy ny vehivavy tokan-tena no avela hanao sonia ny, mandefa sy mahazo internet sy ny hafatra, hanatevin-daharana ireo vondrona, ary hijery ny zava-nitranga, ary izany rehetra izany maimaim-poana tanteraka ho azy ireo ny hanao izany. Tsy misy miafina fees no handeha miseho ny taty aoriana. Online mampiaraka toerana ho an’ny mpivady manome asa fanompoana manan-danja ho an’ny olona izay tia ny fifandraisana mba ho kely mainty sy ny fotsy ary kely grayer. Noho izany, ny manaraka ianao manampy ny fahatelo (na fahefatra na fahadimy) ny mifangaro, jereo ny lisitra etsy ambony.
Mampanantena isika fa ianao ho afa-po
Toy ny tonian-dahatsoratry ny Toro-hevitra Mampiaraka, dia hanara-maso ny votoaty tetikady, ny haino aman-jery ara-tsosialy andraikitra, sy ny haino aman-jery fahafahana. Rehefa tsy azoko manoratra momba ny fromazy na ny taona fitiavana raharaha amin’ny Leonardo DiCaprio, aho mihaino Ny Beatles, mijery Harry Potter reruns (aho mirehareha Slithering.), na misotro IPAs. Mampiaraka ny Toro-hevitra dia ny fanangonana ny mampiaraka ny manam-pahaizana izay mizara ny fahendrena ao amin’ny ‘ny zava-drehetra mampiaraka’ isan’andro. Disclaimer: Lehibe ny ezaka natao mba hihazonana azo antoka angon-drakitra momba ny rehetra manome aseho. Na izany aza, ity tahirin-kevitra dia omena raha tsy misy ny fiantohana. Ny mpampiasa dia tokony hijery ny tolotra mpamatsy dia tranonkala ofisialy amin’izao fotoana izao, ny teny sy ny antsipirihany. Ny toerana dia mandray onitra avy amin’ny maro ny tolotra voatanisa ao amin’ny habaka. Miaraka amin’ny manan-danja avereno vakiana ny anton-javatra, izany onitra mety hisy fiantraikany ny fomba sy ny toerana vokatra hita manerana ny toerana (anisan’izany, ohatra, ny didy izay izy ireo no miseho). Ny toerana dia tsy ahitana izao rehetra izao ny ampy ny tolotra. Matoan-dahatsoratra naneho ny heviny teo amin’ilay toerana dia hentitra ny manokana sy ny tsy nanome, nanohana, na ankatoavin’ny mpanao dokam-barotra
← Google traikefa
Ny tontolo izao traikefa →